Shiinaha seddex weji oo soo roga Lathe warshad iyo soo saarayaasha | Oturn
Mashiinnadayadu dhammaantood waxay ku quudiyaan Huadian CNC Controller （ama Siemens, Fanuc）, waxay ku guuleysan karaan isku xirnaanta dunmiiqa labalaab ka dibna dhammeeyaa si ay u farsameeyaan daloolin-god, Fiilo dun iyo Sphere.
(1) Mashiinnadayadu dhammaantood waxay ku quudiyaan Huadian CNC Controller （ama Siemens, Fanuc）, waxay ku guuleysan karaan isku xirnaanta dunmiiqa labalaab ka dibna dhammaystiraya si ay u farsameeyaan daloolin-god, Fiilo dun iyo Sphere. Maamulaha CNC wuxuu leeyahay iswaafajin wanaagsan, shaqo awood badan iyo hawlgal fudud.
(2) Hagaha miiska miisaanka ee loo yaqaan 'Feed Sliding Miiska' waxay isticmaalaan bir birta cawlan oo tayo sare leh, tuuryo xunxun oo qulqulaya, xanaaqa iyo daweynta gabowga saddex jeer. Si buuxda u tirtir walbahaarka gudaha, Dusha sare ee habka hagista ah wuxuu qaataa daminta codka weyn iyo adkaanta waxay ku jirtaa HRC55. Iyada oo loo marayo farsamaynta Furimaha Saxda sare, si loo hubiyo saxsanaanta, adkaanta, xasiloonida
(3) Qaybta gudbinta waxay qaadataa saxnaanta kubbadda saxda ah iyo isdhaafsiga si looga takhaluso farqiga, si loo hubiyo in mashiinka wadista joogtada ah.
(4) Madaxa awooda waxaa lagu qalabeeyaa sedex marxaladood oo isbedel xawaare gacan ah oo leh matoor awood badan, gaadho xawaare hoose laakiin awood sare, wuxuu u adkeysan karaa culeyska goynta culus, hagaajinta waxtarka waxqabadka.
(5) Qalabka shaqada wuxuu korsadaa Haydarooliga cadaadiska-iskudhafka otomaatiga ah, si loo wanaajiyo waxtarka loona yareeyo xoogga shaqaalaha.
(6) Mashiinku wuxuu qaataa sifaynta Bartamaha, si loo hubiyo in saliida buuxda ee qaybo kasta oo dhaqaaqaysa ay markaa wanaajiso nolosha mashiinka.
Mashiinka CNC ee khaaska ah ee loo yaqaan 'Valve' waxaa badanaa loo isticmaalaa falanqaynta, jirka bamka, qaybaha otomaatiga ah, qaybaha mashiinada dhismaha iwm.Waxay u shaqeyn kartaa habab badan, tusaale ahaan, wajiga dhamaadka, wareegga dibedda, cirifka hore, godka gudaha, qulqulka, fur Waxay la shaqeysay Huadian CNC Controller （ama Siemens, GSK CNC Controller）, Waxay ogaan kartaa otomaatiga, saxsanaanta sare, noocyo badan iyo wax soo saar tiro badan.
Awoodda madaxa dia. (Mm)
Dhererka Max.Machining (mm)
Xarunta Spindle Hight (mm)
Awoodda matoorrada (kw)
Dhaqaaq Degdeg ah
(mm / daqiiqo)
X-dhidibka / dhidibka Z (mm)
Saliidaynta elektarooniga ah
Isku haynta Haydarooliga
Hore: Nooca Gawaarida CNC Qodista iyo Mashiinka Milling
Xiga: Tuuboyinka Buugga Buugga Lathe
Mashiinka Qodida Keli ah